Farmaajo iyo Kheyre oo shir deg deg ah u fadhiya kadib hadalkii Mursal | SMC
Home WARARKA MAANTA Farmaajo iyo Kheyre oo shir deg deg ah u fadhiya kadib hadalkii...
Farmaajo iyo Kheyre oo shir deg deg ah u fadhiya kadib hadalkii Mursal
Wararka ka imaanaya Villa Soomaaliya ayaa sheegaya inumadaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Kheyre ay lee yihiin shir deg deg ah oo ay albaabadu u xiran yihiin.
Labada nin ayaa lacag badan ku bixiyay doorashadii Maxamed Mursal ku noqday gudoomiyaha Baarlamanka ,waxaana ay isku arkayeen iney isaga dhan lee yihiin, laakiin warqadii maanta ayaa jahwareer ku riday.
Mursal ayaa diiday inuu maqaar saar ahaado, wuxuuna labo fadhi kaga istaagay Farmaajo iyo Kheyre.
Kheyre iyo Farmaajo ayaa hada ka shiraya isbadalka Mursal ee lama filaanka ah iyo sida ay kusii wada shaqeyn karaan. Waxaa laga cabsi qaba iney ku deg degaan iney mooshin ka keenaan.
Madaxweynaha ayaa joojiyay shirarkii iyo qaabiladii madaxda kale, wuxuuna baajiyay dhamaan balamadii uu laha si uu arrintaan xooga u saaro.
Dad badan ayaa is weydiinaya waxa kasoo bixi doonaa shirkooda ,laakiin waxaa muuqata inuu Mursal fursad ku helay Kheyre iyo Farmaajo waxaana laga cabsi qabaa iney kusoo baxday xatooyo lacageed.
Farmaajo ayaa u baahan inuu is badbadiyo madaama ay sii shaqeynayaan guddigii maaliyada ee Golaha Shacabka. Waxaa kaloo Mursal uu toos uga hor yimmid fara galinta lagu hayo doorashada Koonfur Galbeed.
Hadii ay wada shaqeyn waayaan xukuumada iyo Golaha shacabku maxaa Farmaajo la gudboon waa su’aasha ugu badan ee maanta taagan.
Previous articleAkhriso Roobow iyo musharraxiin kale oo soo saaray go’aan xasaasi ah oo 13 qodob ka kooban
Next articleDHAGEYSO: Musharixiinta KGS oo jawaab la siiyey